WEFTI DIBLOMAASIYIIN INGIRIIS AH OO BOOQASHO KU JOOGGA SOMALILAND | WWW.SOMALILAND.NO
WEFTI DIBLOMAASIYIIN INGIRIIS AH OO BOOQASHO KU JOOGGA SOMALILAND
Hargeysa (sl.no) 09 june 2008 – Wefti sare oo ka socda Safaaradaha Ingiriisku ku leeyahay dalalka Itoobiya, Kenya, Yemen, oo dalka ku sugan, ayaa kulamo kala duwan la yeeshay qaar ka mid ah Hay’adaha iyo Wasaaradaha Xukuumadda Somaliland.
Weftigan oo uu horkacayo Safiir ku-xigeenka Safaaradda Ingiriisku ku leeyahay Magaalada Addis-Ababa ee dalka Itoobiya Mr. John Marshal, ayaa waxa kale oo qayb ka ah Xubno ka socda Dawladda dhexe ee Ingiriiska ee Magaalada London. Weftiga, oo dalka ku sugnaan doona muddo laba maalmood ah, isla markaana la kulmi doona Ha’yado iyo Wasaarado kala duwan oo Xukuumadda Somaliland ah, ayaa socdaal ku tegi doonaan Magaalada Berbera ee Gobolka Saaxil.
Weftigan waxa shalay kulan kula yeesheen Xafiiskiisa Wasiirka Arrimaha Dibedda Somaliland Cabdilaahi Maxamed Ducaale, oo kulankaa ka dib, qaar ka mid ah Warbaahinta dalka halkaa ku siiyay xog-waran kooban oo ku saabsan Kulankaa iyo ujeedada Weftigaba. “Weftigu waxay ka kala yimaadeen Safaaradaha Ingiriisku ku leeyahay dalalka Yemen, Itoobiya iyo Kenya. Waxa kale oo weftigan ka mid ah Xubno ka socda Dawladda dhexe ee London” ayuu yidhi Wasiirku, waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi, “Ujeedada ay Weftigani u socdeen waa xoojinta cilaaqaadka labada dal ee dhinacyadiisa kala duwan, sida Iskaashiga dhinacyada Nabadgelyada, Siyaasadda, Dhaqaalaha iyo arrimahaas oo dhan. Waana wax joogto ah, oo socotadeedu joogto tahay.”
Wasiirku wuxuu sheegay in Weftigani ay la ballansan yihiin oo ay la kulmi doonaan Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Hay’adaha kale ee Dawladda. “Waxay weftigani dalka ku sugnaan doonaan laba maalmood, waxaanay la kulmi doonaan oo ay la ballansan yihiin Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Hay’ado kale. Anaga ayay nagu soo horreeyeen, kollay dad kale oo tiro badanna way arki doonaan.” Ayuu yidhi Wasiirku.
Hase ahaatee, waxa jira warar aan rasmi ahayn oo ku gedaaman ujeedada Weftiga qaradan leh u yimi dalka. Kuwaas oo aragti kale ka bixinaya.
« MACALINKA WEYN EE CIYAARAHA FUDUD JAAMAC MAXAMUUD AADAN “KARAACIIN” IYO KOOXDIISA OO WACDARO KA DHIGAY OSLO GAAR AHAAN ABUBAKAR KAKI OO DHIGAY REKORD CUSUB OO 800 BOQOL EE MITIR AH. HAY´AD SAMAFAL NORWEJI AH OO SOMALILAND TAGTAY, HAWLO CAAFIMAADKU UGU HOREEYANA WAX KA QABAN DOONTA »